ဤသည် XM ပြန်လည်သုံးသပ်ကြောင့်ဆိုက်ပရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Forex ပွဲစားဖြစ်ပါသည်, ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ, Ltd ၏ထရေးဒင်းပွိုင့်အဖြစ် 2009 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး XM.com broker.Formerly နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်သောသူတို့အဘို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Forex ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့အဖွဲ့ကကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမူလ Forex ကုန်သွယ်အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာန်ဆောင်မှုများအဆင့်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သူကို interbank ကုန်သည်အုပ်စုတစ်စုကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ XM မှတဆင့်ကုန်သည်များကယခု CFDs, ကုန်စည်နှင့် Forex ဈေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
XM နှင့်အတူကုန်သွယ်ရေး၏အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာကုမ္ပဏီဆိုက်ပရပ်စ်သည်ယူရိုဇုန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလူမြိုးတစျမြိုးခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကြောင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကယူရိုဇုန်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေး၏နိမ့်ဆုံးကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်စံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတွေ့ဆုံဆိုလို။ စကားမစပ်ကြောင့်လည်းဗြိတိန်၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင် (FSA) နဲ့မှတ်ပုံတင်နှင့်ဂျာမနီ၏ဖက်ဒရယ်ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် (BaFin), အရှင်ကုန်သည်များမှအပိုကာကွယ်မှုပေးခြင်း။
XM Forex Trading ၏ပလက်ဖောင်းများ
အများဆုံး Forex ပွဲစားများထိုကဲ့သို့သော MT4 အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ပလက်ဖောင်းကိုဆက်ကပ်ခြင်းနှင့်ကောင်းတစ်ဦးမိုဘိုင်း app နှင့်အတူဤပေါင်းစပ်။ ဒါဟာမိုဘိုင်းကုန်သည်များမှစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ကြောင်း Desktop ကွန်ပျူတာများနှင့်4စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်ငါးရာ၏9ပလက်ဖောင်း, ပေးပါသည်။ သူတို့ဟာတကယ်ပဲ "value ထရေးဒင်းကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှု" ၏လက်ျာဘက်အထိအသက်ရှင်နေထိုင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအဆင့်ဆင့်နှင့်လိုအပ်ချက်များကို၏ကုန်သည်များအဘို့အများကိုမဆိုအခွင့်အလမ်း leftover ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားအဆင့်ဆင့်အကျဉ်းအသေးစိတ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ကြသည်။
XM MT4 ဒေါင်းလုပ်
ဒါကစီးပွားကူးသန်း-ဦးဆောင် Mt4 ပလက်ဖောင်း၏ XM ရဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန် Configure လုပ်လို့ရတဲ့နှင့်ရောနှောနှစ်ဦးစလုံးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်ကျွမ်းကျင်သူကုန်သည်များမှမစိုက်သင့်လျော်သည်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်သတင်းစာကျွေးခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစွမ်းရည်ပေးပါသည်။ အဆိုပါ MT4 ပလက်ဖောင်းမှာလည်းသူတို့ရဲ့လက်စွဲကုန်သွယ်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတစ်ခုမှာနှိပ်ပါထရေးဒင်းပူးပေါင်းမည်နှင့်ပင်သင်တို့အဘို့ရာအရပ်ကိုအရောင်းအ mechanically မှ setup ကိုကွက်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။ တကယ်တော့အကူအညီများသင်သည်သင်၏ချဉ်းကပ်ကုန်သွယ်မှုနဲ့တိုးလိမ့်မည်ဟု Add-ons တွေကိုနှင့် applications များတစ်ပေါင်းလဒ်ရှိပါတယ်။ ဤပလက်ဖောင်းတွင်အဘယ်သူမျှမ requotes နှင့်မျှမငြင်းဆန်နှင့်အတူကုန်သွယ်ရေး CFDs, Futures နှင့် Forex ။
အဆိုပါ MultiTerminal ပလက်ဖောင်းထူးထူးအပြားပြားအကောင့်ကိုသုံးပါနှင့်ချက်ချင်းမျိုးစုံအမိန့်အမျိုးအစားများကိုလုပ်ဆောင်သောသူပိုက်ဆံမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ကုန်သည်များအတွက်အဓိကအားဖြင့်ရည်ရွယ်သည်။ MT4 ၏အင်္ဂါရပ်များအများအပြားတင်ပြပေမယ့် terminal ကိုရိုးရှင်းစွာမြောက်မြားစွာအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်အဖြစ်ကွက်ခွင့်မပေးဖြစ်ကြ၏။ MultiTerminal ဖြစ်စေနည်းပညာလေ့လာမှုပူဇော်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်မြောက်မြားစွာအကောင့်စီမံခန့်ခွဲသူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သူတွေကို၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရည်ရွယ်မြောက်မြားစွာကွပ်မျက်မော်ဒယ်များဖြင့်လိုက်ပါသွား, Real-time အတွက်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းနှင့် system အချက်ပြပေးထားဘူး။
mac အတွက် MT4
ဒါဟာအလွန်လူကြိုက်များ Metatrader4 ပလက်ဖောင်းတစ် mac ဖော်ရွေဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းဒီဗားရှင်းအထက်တွင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ functionality နဲ့အင်္ဂါရပ်များအားလုံးပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအပြိုင် Windows ကို emulator သို့မဟုတ် Windows desktop ပေါ်မှာ run ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်မပါဘဲ Apple ကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုမှုမှကုန်သည်များကခွင့်ပြုထားသည်။
ယခင်ထင်ရှားကြောင့်သူတို့ရှင်းလင်းချက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားပူဇော်အဖြစ် "လူအပေါင်းတို့အဘို့တစ်ခုမှာပွဲစား" ဖြစ်လိုကွညျ့ပါ။ သငျသညျအကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အစုစုကိုမန်နေဂျာများမှာ, သို့မဟုတ်သင် Metatrader4 များ၏ပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူမြောက်မြားစွာအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲအတွက်စေ့စေ့နားထောင်လျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ MT4 MultiTerminal မတူဘဲ, XM ပေးခဲ့သည်ကွက်နှင့်အတူအလိုအလျောက်ထရေးဒင်းခွင့်ပြုနှင့်သင် Metatrader4 ကနေမျှော်လင့်ထားချင်ပါတယ်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဇယားကိုဆက်ကပ်။ ဤမျှလောက်ပိုပြီး thi ဖို့ရှိပါတယ်ကပင်တဦးတည်းအဓိကအကောင့်မှတဆင့်မြောက်မြားစွာ MT4 ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့မြောက်မြားစွာအကောင့်အိတ်ကပ်ခွင့်အဖြစ် s ကိုပလက်ဖောင်း။ ဒီကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုမှလက်ျာဘက်အသံမှန်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ထောက်ခံလုံးဝကဒီမှာရနိုင်တဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အင်္ဂါရပ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အထောက်အပံ့အသင်းနှင့်အတူဟောပြောလော့။
ဒီအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Mac, PC နဲ့တစ်ဘရောက်ဇာကိုပြေး၏ပြည့်စုံသည့်အခြားယန္တရားနှင့်အတူကောင်းစွာ-လိုက်ဖက်သည်။ အဘယ်သူမျှမဒေါင်းလုပ်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ကိုယ့် browser မှာ XM.com ထံမှပလက်ဖောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်မှပြည့်စုံ access ကိုတိုးမြှင့်။ ကုန်သည်ကြီးများထုတ်ဝေမှုကိုအငြင်းနှင့်မျှမ requotes မျှနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ tools များများစွာ၏အကျိုးကျေးဇူးယူနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Metatrader4 ပလက်ဖောင်းလိုပဲ WebTrader4ပလက်ဖောင်းကုန်သွယ်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ခုစီးပွားရေးပြက္ခဒိန်နှင့် streaming များသတင်းတဦးတည်း-click ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာသြဇာနိုင်စွမ်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန် optional ကိုလာပါတယ်။
XM မိမိတို့၏ iPad ကို Trader ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည် iPad အသုံးပြုသူများ MT4 တတ်၏။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ Metatrader4 အကောင့်ဝင်ရောက်ခြင်းကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်စာလိပ်နှင့် zoom ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူအမှန်တကယ်အပြန်အလှန်ဇယားတွေ့ရမယ်။ ဒါဟာအစကုန်သည်များတိကျစွာသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုဆနျးစစျနိုငျကွောငျးအတည်ပြု, ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကို real-time ခန့်မှန်းချက်, ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများတစ်ဦးပြည့်စုံတစ်စုံနှင့်ပြည့်စုံသောကုန်သွယ်သမိုင်းကယ်တင်တတ်၏။ အချို့သော apps များနှင့်မတူဘဲ, ဒီဝေးတစ်ဦးအပိုဆောင်းနေနှင့်အမှန်တကယ်အနေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဝေးလံသောကုန်သွယ်အသိပညာပေးပါဘူး။
IPhone ကို Trader (IOS ကို), မိုဘိုင်း Trader (Windows Mobile အား), Droid Trader (Android) – XM အားလုံးအဓိကစမတ်ဖုန်းများအတွက်မိုဘိုင်းဖြေရှင်းချက်ပေးအဖြစ်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာမစုံလငျကျန်ရစ်ကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းသင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်ရန်သင့်အား MT4 တစ်ဦးကဆင်းတပ်ဆင်ထားဗားရှင်းဆောင်ခဲ့သဖြင့်ခြွင်းချက်ကုန်သွယ်ပျော့ပျောင်းသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင့်အကောင့်ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး tools များ၏အမှန်တကယ်ကိုးကားဆက်ကပ်။ အဆိုပါပလက်ဖောင်းမှာလည်းဆိုင်းငံ့အမိန့်ပါဝင်သောကုန်သွယ်မှုအမိန့်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံအစုံ 30 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း, ကုန်သွယ်ရေးသမိုင်းနှင့်ဇယားထံမှဖြောင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့တတ်လွယ်ခြင်းကိုဆက်ကပ်။
ကုန်သွယ်အကောင့်4မျိုးရှိပါတယ်:
1: XM သုညအကောင့်0င် 56 ရက်နေ့တွင်ငွေကြေးအားလုံး, ရွှေငွေနှင့် 500 ဖို့သြဇာတက်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ်န့်ပေး။
အကောင့်ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအနီးအနိမ့်စွန့်စားချဉ်းကပ်မှုကိုလက်မခံဖို့လိုအပ်သောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်။ ဤသည်ကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်5ဒေါ်လာတစ်ကယ့်ကိုအနိမ့်နိမ့်ဆုံးကနဦးအပ်ငွေ essentials ။
The Standard ထရေးဒင်းအကောင့်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ပိုပြီးကျွမ်းကျင်ကုန်သည်များပိုသင့်လျော်သည်။ အမြတ်အစွန်း Micro နဲ့ထရေးဒင်းအကောင့်အဖြစ်ဆင်တူသော်လည်း, စံကုန်သွယ်အကောင့်နှင့်အတူကုန်သည်ကြီးများ သာ. ကြီးမြတ်စာချုပ်အရွယ်အစားနှင့်အတူရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။
သူတို့သည်လည်းစီမံခန့်ခွဲအကောင့်အသစ်များ၏နည်းလမ်းမှတဆင့် XM ပေးပိုဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ဘို့ကုန်သွယ်ဖို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုသို့မဟုတ်အချိန်မရှိဘူးတဲ့သူဖောက်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအကောငျ့ကိုမန်နေဂျာသူတို့ရဲ့အရောင်းအနှင့်အတူ '' ဖောက်သည်ကိုကူညီခြင်းနှင့်လည်းထိုသူတို့အဘို့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အကူအညီများပါလိမ့်မယ်။
အစ္စလာမ့် Accounts ကို
အဆိုပါ Forex စျေးကွက်တစ်ခု universal စျေးကွက်ကြောင်းကို သိ. ကြောင့်လည်းသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာယုံကြည်ချက်နှင့်အညီကုန်သွယ်မှုကိုတောင်းဆိုတဲ့သူတွေကိုကုန်သည်များအတွက်ငွေပေးချေမှုပါစေ။ အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရှာရီယာအယူဝါဒအပေါ်အခြေပြုအရောင်းအဆောင်သောမှကုန်သည်များကခွင့်ပြုထားသည်။
XM Demo Accounts ကို
XM ပေး Demo အကောင့်မှတဆင့်ကုန်သည်များကသူတို့၏ကုန်သွယ် AP ထွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးနိုင်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအန္တာရာယ်စရာမလိုဘဲ proaches ။ ကုန်သည်တွေကိုမှန်ကန်ကုန်သွယ်အခြေအနေများတူအောင်ဖန်တီးရန်ကြိုးစားနိုင်အောင်တိုင်းသရုပ်ပြအကောင့်ကို virtual ပိုက်ဆံအတွက် 100,000 ဒေါ်လာနှင့်အတူပေးအပ်သည်။
တိုက်ရိုက်အကောင့်ဖွင့်လှစ်သည်အခြား Forex stockbrokers ၏လိုအပ်ချက်များကိုထက်တကယ်ကိုနိမ့်သောအရာ5ဒေါ်လာပဲနိမ့်ဆုံးသိုက်နှင့်အတူစတင်သည်။ ထိုသို့သောတတ်နိုင်ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုငွေသွင်းရန်မမရှိမဖြစ်ရှိမယ့်ကတည်းက appetizers များအတွက်အနိမ့်ကုန်သွယ်မြို့တော်နှင့်ထိုမှတပါးနှင့်အတူစတင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်ထိထိရောက်ရောက်လျော်သောရန်ပုံငွေကြီးကြပ်ခွင့်ပြုထားသောသူတို့အဘို့တစ်ညာဘက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကျိန်းသေ XM 5/5 တစ်ဦးအနည်းဆုံး Deposit ရမှတ်ရရှိသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော Forex ပွဲစားများ၏ပင်မထိပ်ဆုံးမှ။
အနိမ့်လောတ Size ကို
နိမ့်ဆုံးသမားရိုးကျအများကြီးအရွယ်အစားအများဆုံးပွဲစားများနှင့်အတူမျှမျှတတဘုံနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုတစ်ကျေနပ်အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခဲသောအရာ 0.01 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ 4/5 တစ်ဦးအနည်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးရမှတ်ရရှိသွား။
XM ရဲ့တင်းကျပ်စွာမှတစ်ဆင့်အမြတ်ရစေသကဲ့သို့စျေးနှုန်းအဖြစ်အများကြီးရွှေ့ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်မပြန့်နှံ့။ အဆိုပါ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးကို pair တစုံများအတွက်ပြန့်ပွားယခုအများဆုံးပွဲစားများပူဇော်နိုင်သလဲဆိုတာထက်ပိုကောင်းဖြစ်တိုင်းတာသော 1.8 pips ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ပွဲစားပလက်ဖောင်းအပေါ် operated နိုင်သည့်ရေ 100 တူရိယာထက်ပိုရှိပြီးဒီ CFDs, Forex, သာတူညီမျှညွှန်းကိန်း, အဖိုးတန်သတ္ထုများနှင့်စွမ်းအင်ပါဝင်သည်။ တင်ပြပိုင်ဆိုင်မှု၏ဤအရောအနှောစေခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းရရှိမယ့်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေခွင့်အလမ်းတွေကိုအများကြီးဖွင့်လှစ်။
ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုး XM 4/5 တစ် Tradable ပိုင်ဆိုင်မှုရမှတ်လိုင်စင်ရ။
သိုက်နှင့် Withdrawal နည်းလမ်းများ
သူတို့သည်အလွန်ပုံမှန်အသုံးပြုသောဘဏ်လုပ်ငန်းအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှု, အကြွေးကဒ်များကိုဒေသခံဘဏ်လွှဲပြောင်း, ဘဏ်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်း, Western Union နှင့် MoneyGram ပါဝင်သောယနေ့ချဉ်းကပ်ယူပါ။ သူတို့ရဲ့လွှမ်းခြုံမျှမျှတတကျယ်ပြန့်သည်နှင့်အကောင့်သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြည့်စွက်အပေါ်ကိုပိုမိုပျော့ပျောင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဒါဟာ 5/5 တစ်ဦးအပ်ငွေနှင့် Withdrawal နည်းလမ်းများရမှတ်ရရှိ။
အဆိုပါရန်ပုံငွေများ XM ကဒ်များဒါမှမဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားသော e-ပိုက်ဆံအိတ်စနစ်များကိုမဆိုသို့ပြောင်းရွှေ့လျှင်စုစုပေါင်းရုပ်သိမ်းရေးတောင်းဆိုမှုများကို 24 နာရီအတွင်းအုပ်ချုပ်နေကြသည်။ ဘဏ်ဝါယာကြိုးများနှင့်ခရက်ဒစ် / debit card ကိုအစား2မှ5စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ငါဖန်ဆင်းသောမြောက်မြားစွာဆုတ်ခွာစမ်းသပ်မှုအပေါ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, သူတို့ကဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မမှီခဲ့ကြခြင်းနှင့်ငါသူတို့စိတ်ချပါနည်းတူနောက်ကျောကိုငါ့ပိုက်ဆံဆည်းပူးဖို့နိုင်စွမ်းရှိခဲ့သည်။
Quick ၏ဤအဆင့်တွင် 10/10 တစ် Withdrawal အချိန်ရမှတ်ရရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့် XM.com မှာကုန်သွယ်ရေး?
ငါတို့သည်သင်တို့ XM နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုသင့်တယ်စဉ်းစားအဘယ်ကြောင့်မြောက်မြားစွာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကသာက5ဒေါ်လာတစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်နှင့်များစွာသောအမြန်သိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာစနစ်များရှိသည်။ သူတို့က 888 ၏ကြီးမားသောသြဇာများကို: ဖြစ်သင့်လျော်သောကုန်သည်များအတွက် 1, ဤ Forex စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်အများအပြားအာဏာပိုင်များအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပြီအဖြစ်စည်းမျဉ်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်အတူစိုးရိမ်ပွဲစားများ, တစ်ခုခုတစ်နေရာရာတခြားမကြည့်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အလွန်နိုင်စွမ်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းအဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့်မှတဆင့်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကုန်သည်များအဖြစ်ရွေးချယ်ရေးမန်နေဂျာသည်။
ကျနော်တို့က Forex ပွဲစားကနေသင့်ရဲ့အလားအလာအထိအသက်ရှင်နေထိုင်လိမ့်မည်ဟုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနေကြသည်။ အခြေခံအားဖြင့်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုစုံစမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုကြည့်ပါ။ သငျသညျ Self-စိတ်ချပါဤသူသည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ဖို့လိုအပျတဲ့ပွဲစားကြောင်းတဲ့အခါ, သူတို့ရဲ့အလွန်ဆွဲဆောင်မှုကြိုဆိုဆုကြေးငွေ၏အကျိုးကျေးဇူးယူနှင့်သင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါ။
ကော်မရှင် & ပြံ့နှံ့
ရောနှောအများဆုံး Forex ပွဲစားများ, XM မဆိုအခကြေးငွေသို့မဟုတ်ကော်မရှင်အားသွင်းပါဘူး။ ၎င်း၏အရပ်ဌာန၌သူတို့မှတဆင့်ဦးဆောင်လမ်းပြအရောင်းအပေါ်မှာပြန့်ပွားကောက်ခံ။ အကောင့်အမျိုးအစားများနှင့်တူရိယာအပေါ်ဆက်ပြောပါတယ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာတစ်ဦးအဖြစ် PIP ကနေ start ပြန့်နှံ့။ ကုန်သည်များအဘို့အရွေးချယ်နိုင်သော fixed ပျံ့နှံ့သို့မဟုတ် mutable ပြန့်ပွားနေတဲ့ကို select လုပ်ပါရှိပါသည်။ တန်ဖိုးများကိုပုံမှန်4ဂဏန်းစျေးနှုန်း၎င်း၏အရပ်ဌာန၌5ကြိမ်မြောက်ဂဏန်းမှရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှန့်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များပူဇော်ရန်, ကြောင့်လည်းဒဿမကိန်း PIP စျေးနှုန်းသည်။
အဆိုပါ 888: XM ပေး 1 သြဇာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ 100 ကျော်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာနှင့် 60 ကျော်ငွေကြေးအားလုံးနှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းနှင့်ရှစ်အဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ဖုန်းဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သိုက်မရှိ သာ. ကြီးကန့်သတ်ရှိပါတယ်။
ဒါဟာအထိ 50 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထိ 20 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးအပိုဆောင်းသိုက်ဆုကြေးငွေ၏ဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်းနှင့်ဤကအချိန်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက်ပွင့်လင်းစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပိုကြီးတဲ့အရပ်တို့ကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားပါသည်။ သူတို့ပေးကြောင်းဆုကြေးငွေသာကုန်သွယ် drives တွေကိုပေးနေကြတယ်နှင့်ဆုတ်ခွာမပေးနိုငျသညျ, သို့သျောလညျးသတငျးကောငျးဆုကြေးငွေကတဆင့်လုပ်ရှိသမျှကိုအမြတ်အစွန်းမဆိုကန့်သတ်သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များကိုမှုထုတ်ယူနိုင်ပါသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒီကဏ္ဍအတွက်သူတို့ 4/5 တစ်အပိုဆုလိုအပ်ချက်များရမှတ်လက်ခံရရှိသည်။
XM အလွယ်တကူဖက်စ်, ဖုန်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှချက်တင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှနီးပါးတစ်ဦးချင်းစီရုပ်သံလိုင်းမှာသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ဤအချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကယ်ဖို့ငါ့ကို allowable ဖို့ရှေးခယျြမှုရှိသညျကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ကိုငါဆက်သွယ်သော်လည်း, စောင့်ဆိုင်းအချိန်ရိုးရှင်းစွာထက်နည်းတစ်ဆယ်စက္ကန့်ကို ယူ. ၎င်းတို့၏ပြန်စာများအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွန်ပွင့်လင်းသည့်အချိန်အများစုဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်စကားပြောဆိုမှုသာမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အဆက်ပြောသည်။ သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအေးဂျင့်နဲ့ငါ့အမှန်တကယ်စကားပြောဆိုမှုအပေါ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ငါကတခြား Forex ပွဲစားများအနေဖြင့်အခြားမန်နေဂျာယေဘုယျအားဖြင့်ကျင့်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်များကိုမဆိုမျိုးကသူတို့ကိုအကြှနျုပျ၏မေးခွန်းများကိုမဆိုဖို့အဖြေကိုပေးအတွက်အလွန်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရှာပြီးအစဉ်အမြဲငါတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့မဟုတ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူအကြှနျုပျ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအကောင်းမြင်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဒီ XM များအတွက်ပံ့ပိုးမှုများအတွက် 9/10 ၏မြင့်မားသောရမှတ်ရရှိသည်။
ယူဆချက်စေရန်, XM တူသောမြောက်မြားစွာသီးခြားအားသာချက်များရှိသည်:
အမိန့်များအဘယ်သူမျှမငြင်းပယ်ခံရ (100% ကွပ်မျက်)
1: 888 အထိထူးခြားတဲ့သြဇာ
တင်းကျပ်သော NO Re-ကိုးကား
ကုန်သွယ်အကောင့်များ၏အမျိုးမျိုးသော types များအကြားအမြတ်အစွန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌သိပ်ခွဲခြားမထားဘူး
PayPal ကဆိုရန်ပုံငွေ option ကိုရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။
အဆိုပါ rebranding လေ့ကျင့်ခန်း XM ပြောင်းလဲနေသောစျေးကွက်အခြေအနေရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့ကြိုးစားနေသောအသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ကပွဲစားသူတို့ရဲ့ဖောက်သည် '' အမှန်တကယ် requirem မှလက်ခံကြောင်းဖော်ပြပေးအဖြစ်ဒါကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်ents ။ အဆိုပါ "အဘယ်သူမျှမ Requote" မူဝါဒကိုဒီအစာရှောင်ခြင်းရွေ့လျားဈေး၌မြောက်မြားစွာကုန်သည်များကရင်ဆိုင်မယ့်အဓိကပြဿနာဖြစ်သကဲ့သို့သူတို့ကိုသည်အခြားပွဲစားများအနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုခွဲခြားရန်အဘို့အဖြောင့်မတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်စုံအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွား, XM အတွေ့အကြုံရှိနှင့်အသစ်နှစ်မျိုးလုံးကုန်သည်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံပွဲစားနဲ့တူပုံရသည်။ XM.com ပတ်သက်. အရေးကြီးသောအရာကလိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မယ့်တာဖြစ်ပါတယ် ASIC ကို C အတွက်သြစတြေးလျနှင့် CYSEC
ဒါကြောင့်သင်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုနဲ့တူလျှင်ရှယ်ယာများကလူမှုမီဒီယာကွန်ရက်များပေါ်တွင်ဒီ XM.com ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကြှနျုပျတို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးအစွန်အဖျား။ XMreview အကြောင်းကိုပိုမိုသိရန် www.ForexSQ.com က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။
PC အတွက် MT5